Ogeysiis sharci ah oo ku saabsan dhacdooyinka xogta - Office of the Washington State Auditor
SAO Home/ Ogeysiis sharci ah oo ku saabsan dhacdooyinka xogta
Ogeysiis sharci ah oo ku saabsan dhacdooyinka xogta
Warqad ka socota hantidhawre McCarthy (waa la cusbooneysiiyay 5/21/2021)
Xafiiska Washington State Auditor (“SAO”) (Hanti Dhawrka Gobolka Washington) ayaa cusbooneysiiyay degelkan si loo siiyo casriyeyn ku saabsan tallaabooyinka ay qaaday SAO si looga jawaabo dhacdadii amniga xogta ee ay la kulantay Accellion, oo ah adeeg gudbinta faylka saddexaad oo loogu talagalay faylasha xogta waaweyn ee ay adeegsadeen SAO ujeedooyin xisaabeed.
Tan iyo markii ugu horreysay ee aan ogaanay dhacdadan, SAO waxay leedahay labo ujeedo: (1) aqoonsiga, ogeysiinta iyo bixinta ilaha lagu caawinayo shakhsiyaadka ay suuragal tahay in macluumaadkooda shaqsiyeed saameeyo; iyo (2) kor u qaadida siyaabaha aan u gudbino una ilaalino macluumaadka shakhsiyeed.
Bishii Maarso, waxaan dhamenay hawshii dirista ogeysiisyada ii-maylka ee loogu talagalay dadka macluumaadkoodu ku jiray faylasha xogta ee la xiriira lacagaha lacagta shaqo la’aanta ee u dhexeeya 2017 iyo 2020. Haddii aad u maleyneyso inay saameyn kugu yeelan karto, laakiin aadan helin ama aadan sii haysan I-maylka, boggan waxaa ku jira isla macluumaadka, oo ay ku jiraan sida loo diiwaan geliyo hal sano oo kormeer deyn oo bilaash ah iyo adeegyada soo celinta xatooyada aqoonsiga. Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, fadlan haka lalaboon inaad wacdo xarunteena wicitaanka ee 1-855-789-0673, Isniinta – Jimcaha laga bilaabo 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Waqtiga Baasifiga.
Iyada oo qayb ka ah baaritaankayaga socda, waxaan dhowaan dhameystirnay dib-u-eegista dambiga ee feylasha kale ee xogta ee ku jiray barxadda Accellion markii ay dhacdadu dhacday. Dib-u-eegiddani waxay bixisay macluumaadka loo baahan yahay si loo aqoonsado dadka kale ee macluumaadka shakhsi ahaaneed ay saameyn ku yeelan karto. SAO waxay la shaqeyneysaa hay’adaha gobolka iyo kuwa maxaliga ah ee xogtooda ku lug laheyd helitaanka ama xaqiijinta macluumaadka xiriirka shaqsiyaadka iyo in la ogeysiiyo Dadka Lambarada Amniga Bulshada ay kujireen feylashaan xogta la saameeyay waxay heli doonaan dalab bilaash ah, laba iyo toban bilood kormeer deynta iyo adeegyo dib u soo celin aqoonsi.
SAO waxaan qaadaynaa macluumaadka xogta amni oo waxaa naga go’an inaan ilaalino sirta macluumaadka shaqsiga na aaminay. Waxaad si aad u qoomaynaynaa walaac kasta ama dhibaatada ay tani sababi karto. Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, fadlan haka lalaboon inaad wacdo xarunteena wicitaanka ee 1-855-789-0673, Isniinta – Jimcaha laga bilaabo 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Waqtiga Baasifiga. Intaa waxa dheer, waxaan ku ilaalin doonaa bogan, sao.wa.gov/breach2021, La-cusboonaysiiyey.
Hantidhawraha Gobolka Washington
Su’aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan dhacdadii nabadgelyada ee Accellion
Maxaa dhacay? Jeeniwari dhexdeedi 2021, SAO ayaa la ogaysiiyay dhacdooyinka imandoona ee nabadeed ee ku taxaluqa faylka iskubadalka adeega Accellion. SAO si deg-deg ah ayay ula xirirtay Accellion si ay faah faahin gaar ah u helaan. Inta badan dhawrka todobaad ee soo socda, SAO waxay ogaatay in qof aan la fasaxin uu marin u helay xogta ku kaydsan akoonka wareejinta faylka SAO ee Accellion. SAO isla markiiba waxay bilaabeen baaritaan si loo ogaado baaxadda dhacdada iyo sida ay u saameyn ku yeelatay macluumaadka loo diray SAO ujeedooyin xisaabeed, waxayna la shaqeysay Accellion si loo aqoonsado feylasha laga yaabo inay saameeyeen dhacdada. SAO waxay sidoo kale hawlgelisay khubaro ku xeel dheer amniga internetka si ay uga caawiyaan baaritaanka.
Macluumaad noocee ah ayaa ku lug lahaa? Ogeysiisyo ayaa lagu soo diray iimayl loogu talagalay dadka macluumaadkoodu ku jiray faylalka xogta ee la xiriira dheefaha shaqo la’aanta ee ay bixiso Waaxda Amniga Shaqada ee muddada 2017 illaa 2020. Faylashan waxay ka koobnaan karaan magaca shaqsiga, lambarka amniga bulshada, taariikhda dhalashada, cinwaanka iimaylka iyo wadada, lambarka akoonka iyo lambarka wadiiqada lambarka.
SAO sidoo kale waxay u direysaa ogeysiis shaqsiyeed dadka ay xogtoodu ku ogaatay dib u eegista danbiyeed ee faylasha xogta kale ee wakaaladaha gobolka iyo dowladaha hoose ee laga yaabo inay saameyn ku yeelatay dhacdada Accellion Faylashaasi waxay ka koobnaayeen hal ama in ka badan – laakiin dhammaantood maahan – kuwa soo socda: magacyada dadka, Lambarrada Amniga Bulshada, lambarrada aqoonsiga ardayga, taariikhda dhalashada, amaahda ama lambarrada koontada bangiga, lambarrada caymiska caafimaadka, iyo/ama iyo macluumaadka la xiriira caafimaadka.
Ma dadka Washington baa la bartilmaameedsaday? Dhacdadan ayaa saameyn ku yeelatay macaamiisha Accellion ee adduunka oo dhan waxaana hada ku socda baaritaan ay wadaan ciidamada sharciga. Majirto wax cadayn ah taariikh sax ah oo muujinaysa dhacdadan in la beegsaday Gobolka Washington ama cid kamid ah dadka degan. Dhacdadan waxay saamaysay gobolo badan oo fadaraal, gobol, gude, qabiil, iyo ururo dawli ah oo xuduudkooda ahba si lamid ah ganacsiyada shirkada gaarka loo leeyahay oo ay kujiraan qaybaha caafimaadka, sharciga, isgaadhsiinta, maaliyada, waxbarashada sare, tafaariiqda iyo tamarta.
Miyay SAO isticmalaysaa alaab dhacday ama hore? Xilligii jebinta, Accellion wuxuu taageeri jiray oo u adeegi jiray goobta wareejinta faylka ee SAO iyo ururro kale oo badan ay isticmaaleen. Xagaagii dambe 2020, SAO waxay bilawday nidaamka ay ugu soo guurayso goobta cusub ee Accellion, Kiteworks, nidaamka waxa la dhameeyay Dec. 31, 2020.
Sida loo helo kormeerka amaahda lacag la’aanta ah iyo adeegyada kale haddii Lambarkaaga Bulshada ay ku lug lahayd (waa la cusbooneysiiyay 5/21/2021)
SAO waxay sameyneysaa 12 bilood oo ah maamulid deyn oo bilaash ah iyo adeegyada dib u soo celinta aqoonsiga iyadoo loo marayo Experian oo aad adigu heli karto. Sharciyada arimaha gaarka ah awgood, awood uma lihin inaan si toos ah kuu diiwaangelino.
Haddii aad heshay ogeysiis leh Nidaamka Waxqabadka iyo tilmaamo gaar ah oo loogu talagalay diiwaangelinta kormeerka deynta ee Experian, fadlan raac tilmaamaha ku jira ogeysiiskaas. Haddii aadan hubin in lambarkaaga sooshiyal sekuyuuritiga uu ku lug lahaa dhacdadii Accellion, ama haddii aadan heli karin xiriirkii SAO kuu soo diray, fadlan ka wac xarunta wicitaankeenna qaaska ah 1-855-789-0673, Isniinta – Jimcaha laga bilaabo 8: 00 a.m. — 5:00 p.m. Waqtiga Baasifigga iyo wakiil ayaa kaa caawin kara go’aaminta haddii aad u-qalanto kormeerka deynta bilaashka ah.
Barnaamijku wuxuu leeyahay laba qaybood:
Maamulida Daynta. Xubin 12 bilood bilaash ah oo loogu talagalay xubinimada aqoonsiga shaqada Daynta ee Experian 3B. Alaabtani waxay caawineysaa in la ogaado isticmaal xumada suurtagalka ah ee macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyadoo lala socdo dhammaan saddexda wakaaladood ee amaahda waaweyn waxayna ku siinayaan adeegyo ilaalin aqoonsi oo diiradda saaraya isla markiiba aqoonsashada iyo xallinta xatooyada aqoonsiga. Aqoonsiga Shaqada ee 3B waa mid bilaash kuu ah adiga oo isqorista barnaamijkan ma dhaawaceyso dhibcahaaga daynta.
Soo Celinta Aqoonsiga. Haddii aad ka shakisan tahay adeegsiga musuqmaasuqa ah ee macluumaadkaaga ama aqoonsiga xatooyada, oo aad jeceshahay inaad ka wada hadasho sida loo xalliyo arrimahaas, waxaad la xidhiidhi kartaa wakiil Experian ah adoo adeegsanaya macluumaadka xidhiidhka ee Experian-ka hoose. Adeegani waa kuu diyaar hal sano mana u baahnid inaad isqorto ama aad qaado talaabo kale waqtigan. Haddii, ka dib markaad xaaladdaada kala hadasho wakiil, la go’aansado in taageerada soo celinta aqoonsiga loo baahan yahay, Wakiilka Aqoonsiga Experian ayaa diyaar u ah inuu kula shaqeeyo si uu u baadho una xalliyo dhacdo kasta oo khayaano ah oo dhacday laga soo bilaabo taariikhda dhacdada (oo ay ku jiraan, sida ugu habboon, kaa caawinta la xidhiidhida deyn bixiyeyaasha si looga doodo eedeymaha iyo xisaabaadka dhow; kaa caawinta inaad geliso xayiraadda feylkaaga deynta saddexda xafiis ee deynta ugu waaweyn).
Hadii aad hesho iimayl kaaga yimaada SAO oo uu ku jiro koodhka hagaajinta shaqsiga: Waad iska diiwaan gelin kartaa 12-ka bilood ee maamulka amaahda bilaashka ah/barnaamijka soo celinta aqoonsiga iyadoo loo marayo Experian iyadoo la adeegsanayo lambarkaaga Shaqaalaynta Diiwaangelinta ee shakhsi ahaaneed ee lagugu siiyay emaylka aad ka heshay “Jawaab-celinta Dhacdada Hantidhawrka Gobolka Washington”. Macluumaad dheeraad ah booqo www.experianidworks.com/3bcredit.
Iyadoo ay lasocoto koodhka saxitaanka shaqsiga, sidoo kale waxaad si toos ah u wici kartaa si aad isku diwaangaliso barnaamijka adigoo isticmaalaya lambarka bilaashka ah ee: 1-833-256-3154. Wakiilo ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan kana jawaabaan su’aalaha ku saabsan barnaamijka Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 6:00a.m. ilaa 8:00p.m. PST iyo Sabtida/Axada 8:00a.m.-5:00p.m. PST.
Haddii aad heshay macaashka shaqo la’aanta intii u dhaxeysay 2017 iyo 2020, laakiin aadan helin emayl wata Koodh-hawleedka Shakhsiyeed illaa Maarso 15, 2021, muddada isdiiwaangelintu waxay furan tahay illaa Juun 6, 2021. Weli waad iska qori kartaa kormeerka amaahda Experian adoo raacaya tilmaamahan:
Booqo www.experianidworks.com/3bcredit ama si toos ah u wici kartaa si aad isku diwaangaliso barnaamijka
adigoo isticmaalaya lambarka bilaashka ah ee: 1-833-256-3154,
Waxaad u baahandoontaa in lagu siiyo koodh: WSHAUD2021.
Waxaad u baahandoonta in lagu siiyo lambarka shaqada: B009702
Isqoristu waxay furmi doontaa ilaa 6/6/2021.
Faahfaahin Dheeraad ah oo Ku Saabsan Xubinimada 12-BILOOD EE SHAQADA AQOONSIGA EXPERIAN 3B: Kaadhka Credit-ku waa mid aan looga baahnayn isqorista shaqada Aqoonsiga daynta Experian 3B.
Waxaad la xidhiidhi kartaa Experian isla markaaba — adigoon u baahnayn inaad isqorto — wixii khuseeya arrimaha wax isdabamarinta. Khabiirada soo celinta aqoonsiga ayaa diyaar u ah inay kaa caawiyaan amaahda iyo wax isdaba marinta aan daynta la xidhiidhin.
Markaad isqorto Aqoonsiga Shaqada Experian, waxaad galitaan u yeelan doontaa astaamaha dheeraadka ah ee soo socda:
Galitaanka Warbixinta amaahda ee Experian: Eeg macluumaadka la xidhiidha feylkaaga amaahda. Warbixinaha maalinlaha ah ee daynta ayay heli karaan kaliya xubnaha Online ka ahi.*
Maamulida daynta: maamulayaasha shaqaynaya ee Experian, Equifax iyo TransUnion ee faylasha muujinaya wax isdaba marinta.
Experian Shaqada Aqoonsiga la kordhiyayCARETM: Waxaad heleysaa mid heer sare oo ah Soo Celinta Aqoonsiga xitaa ka dib marka xubinimadaada shaqada aqoonsiga ee Experian ay dhacdo. $1 Million oo caymiska aqoonsashada tuugada ah**: Waxay bixisaa caymis ku baxa kharashyada qaarkood iyo
wareejinta lacagaha elektarooniga ah ee aan la oggolaan.
Xubnaha khadka aan online ka ahayn ah waxay ku haboonaan doonaan inay soo wacaan warbixinno saddex-biloodle
ah oo dheeri ah ka dib markay is-diiwaangeliyaan.
** Caymiska Xatooyada Aqoonsiga waxaa uu ku qoranyahay oo maamula Shirkadda Caymiska Bangiyada Mareykanka ee
Florida, shirkad Assurant ah. Fadlan tixraac shuruudaha siyaasadaha dhabta ah, xaaladaha, iyo kasaarista kabka.
Daboolida waxaa laga yaabaa inaan laga helin dhamaan awoodaha cadaalada.
Sida ugu wanaagsan ee aad ku ilaalin karto kahortagista xatooyada aqoonsiga
Dib u eeg Bayaanada akoonkaaga oo Ogow hawlaha Shakiga leh ee dhaqangalinta sharciga: Tallaabo taxaddar leh, waxaan kugula talineynaa inaad feejignaato oo aad dib u eegis ku sameyso xisaabaadkaaga iyo warbixinnadaada deynta. Hadii aad dareento wax hawlo shaki leh oo akoonkaaga ah, waa inaad si dhakhso leh ugu wargalisaa hay’add maaliyadeed ama shirkadda akoonkaaga gacanta ku haysa. Sidoo kale waa inaad si dhakhso leh ugu soo wargalisaa wax kasta oo wax isdaba marin ah ama wax kasta oo looga shakiyo xatooyo aqoonsi maamulka sharci fulinta saxda ah, xeer ilaaliyahaaga guud ee gobolkaaga, iyo/ama Guddiga Ganacsiga Federaalka (“FTC”).
Nuqul Warbixinta Daynta ah: Waxaad ka heli kartaa nuqul bilaash ah warbixintaada amaahda mid kasta oo ka mid ah saddexda wakaalada waaweyn ee ka warbixiya amaahda mar 12kii biloodba mar adoo booqanaya
www.annualcreditreport.com/, soo waca taleefanka lacag la’aanta ah ee 877-322-8228, ama adoo buuxiya Foomka Codsiga Warbixinta Amaahda Sannadlaha ah kuna diraya Adeegga Codsiga Warbixinta Amaahda ee Sannadlaha, P.O. Khaanada 105281, Atlanta, GA 30348. Sidoo kale waxaad la xidhiidhi kartaa mid kamid ah sadexdan wakaalad warbixineed ee soo socda:
P.O. Khaanda 105851
Goboka Atlanta, GA 30348
P.O. Khaanada 9532
Magaalada Allen, TX 75013
P.O. Khaanada 1000
Magaalada Chester, PA 19016
Ka feejignaanta Wax isdabamarinta: Waxa laga yaabaa inaad tixgaliso inaad samayso feejignaan wax isdabamarin oo ku jirta warbixintaada daynta. Xasuusinta hore ee wax isdaba marintu waa bilaash oo waxaad kusii haysan doontaa faylkaaga daynta mudo hal sano ah. Ogeysiisyada feegjinaanta daymaha hawlaha wax isdabo marinta macquula ee warbixintaaa ku jira iyo codsiyada in dayn ururuiyuhu kula soo xidhiidhay ka hor intaanu ku sameyn wax akoona magacaaga. Si aad u dejisid wargaliye warbixintada daynta ah, la xidhiidh mid ka mid saddex wakaaladood ee warbixinta daymaha ee kor lagu xusay. Macluumaad dheeriya waxa laga helayaa www.annualcreditreport.com.
Cuno qabaytaynta amniga: Gobolka Washington iyo gobolada kale qaar, waxaad xaq u leedahay inaad saartid cuno qabatayn amni faylkaaga daynta. Tani waxay ka difaaci doontaa daynta cusub in lagu furo magacaaa iyadoon la isticmaalin PIN laguusoo saaray adiga markii aad bilowday cuno qabataynta. Cuno qabataynta amni waxa loogu talo galay in lagu difaaco cida daynta leh mustaqbalka inay hesho warbixinta dayntaa iyadoonad ogolayn. Natiijadaasi
awgeed, isticmaalka cuno qabatayn amni wuxuu faro galinayaa ama dib u dhigayaa awoodaada inaad heshid dayn. Waa inaad si gooniya u saartaa cuno qabataynta faylkaaga daynta ee wakaalda warbixinta daynta. Ma jiro wax lacag fii ah si aad u saartid, u qaadid ama uga saartid cuno qabataynta amni. Si aad u saartid cuno qabatayn amni, waxa lagaaga baahan karaa inaad siisid wakaalada warbixinta macmiilka macluumaadka ku aqoonsanaaya, oo ay ku jiraan
macaaga oo dhameystiran, nambarka Adeegyada Bulshada, taariikhda dhalashada, ciwaanka hada ama hpre, nuqulka kaadhak aqoonsigaaga, iyo biilka biyaha ama laydhka, bayaan bangi ama bayaan caymis.
Khayraad kale oo Dheeri iyo Billaasha: Waxaad ka heli kartaa macluumaadka wakaaladaha warbixinta macmiilka, Komishanka Ganacsiga Fadaraalka ama Xeer-ilaaliyaha Guud ee gobolkaaga talaabooyinka aad horey u qaadi kartid ee ka hortagaya xadida aqoonsiga. Waxaad u warin kartaa xatooyada sharci-fulinta deegaanka, oo ay ku jiraan FTC ama
Xeer-ilaaliya Guud ee gobolka. Halkan waxa ah macluumaadka lagala xiriiraayo FTC:
Komishanka Ganacsiga Fadaraalka, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580
www.consumer.ftc.gov, and www.ftc.gov/idtheft 1-877-438-4338.
Waxaad sidoo kale xaq ku leedahay Xeerka Warbixinta Cadaalada ah ee Daymaha (FCRA): Xuquuqahan waxa ka mid ah inaad ogaatid waxa ku jira faylkaaga; inaad ka cabatid dhameystir la; aan ama inaanu sax ahayn macluumaadku; iyo inaad u baahatid in wakaaladaha warbixinta macmiilku saxaan ama masaxaan, macluumaadka kala dhiman, ama aan la xaqiijin karin. Macluumaad dheeriya oo khuseeya FCRA, fadlan booqo www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf.
Jan. 12: SAO waxay heshey digniin guud oo ka socota Accellion oo ku socota isticmaaleyaasha barnaamijkeeda Kiteworks ee la xidhiidha dhacdo nabadgelyo oo suurtagal ah oo la socota qalabka wareejinta faylka Accellion ee SAO aysan isticmaalin.
Jan. 13: SAO ayaa ogeysiisay WaTech waxayna xidhiidh balaadhan la samaysay Accellion si loo ogaado feylashee ayaa ku socda ama ka imanaya SAO ee laga yaabo inay saameysay.
Todobaadka bisha Jan.25: SAO waxay go’aaminsay in Qaar ka mid ah Faylasha macluumaadka SAO ay aqoonsadeen Accellion oo ka kooban macluumaad shaqsi ah, ee ka dhexeeya dadka kale, kasoo soo helay kabka shaqo la’aanta Waaxda Amniga Shaqaalaysiinta (“ESD”).
Feb. 1: SAO waxay u sheegtay dhacdaan dadwaynaha. SAO waxay raacday nidaamka ogaysiiska badalka ee uu ogolyahay sharcigu iyo ogaysiiska hore iyadoo la eegayo tixgalinayo dhacdadan waxa lagu soo dhajiyay mareegta SAO, sao.wa.gov/breach2021, taasoo aan cusboonaysiinay.
Feb. 12: SAO ogeysiiyay Xeer ilaaliyaha guud. Ogaysiiskaas waa lagu daray Feb. 26.
Feb. 25: SAO waxay hagaajisay xarunta wicitaanka halkaasoo dadku ay waydiin karaan su’aalo oo ay heli karaan macluumaad ku saabsan helitaanka caawimo la xidhiidha dhacdada, oo ay bilawdo udirista iimaylada dadka xogtoodu ku jirto faylka kabka shaqo la’aanta.
Linkiyo dibada ah oo la xidhiidha jabinta